Heshiis laga gaaray dagaal Beeleed ka dhacay Gobolka Gedo - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Heshiis laga gaaray dagaal Beeleed ka dhacay Gobolka Gedo
Maalmihii la soo dhaafay ayaa duleedka degmada Doolow ka socday shir u dhaxeeyay Odayaasha & waxgaradka laba da beelood, six al looga gaaro colaada oo ah mid soo laab laabatay.
Shirka ayaa waxaa laga soo saaray qodobo ay ku heshiiyeen dhinacyada si loo soo afjaro dagaalka labada maleeshiyo beeleed ku dhex-maray degaan ku yaal duleedka degmada Doolow ee Gobolka Gedo.
Shirka oo ay gobjoog ahaayeen, Maamulka degmada Doolow, Saraakiil ka tirsan Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida, maamulka degaanka Bohol Garas, waxaana laga saaray qodobadaan.
1: In labada maleeshiyo beeleed la kala dhex-dhigo xabad joojin, isla markaana labada maleeshiyo beeleed la kala qaado.
2: In la dhameeyo waxyaabaha soo cel celiya colaada labada beelood meeshana laga saaro waxkasta oo khilaaf keeni kara.
3: In la sii wado wada-hadallada Nabadeed si loo soo afjaro colaada oo ah mid kusoo lab laabatay degaannada hoostaga degmada doolow ee Gobolka Gedo.
Ugu dambeyn qaar kamid ah Odayaasha, waxgaradka labada Beelood & madaxda ka qeyb gashay shirka ayaa soo dhaweeyay qodobada kasoo baxay shirka, waxaana Odayaasha Dhaqanka ay sheegeen inay dhaqan gelin doonaan heshiiska.
Previous articleHowlgallo ka socda Gobolka Mudug iyo Galmudug oo ka hadashay
Next articleSoomaaliya oo gashay kaalinta 10-aad ee orodka Olombikada Tokyo